Akụkọ banyere Shaka Zulu (1786-1828) na ọmụmụ nke ndị Zulu - Afrikhepri Fondation
Tinye isiokwu gị na SITE
Fraịdee, Ọgọst 14, 2020
Akụkọ nke Shaka Zulu (1786-1828) na ọmụmụ nke ndị Zulu
Cotu a ka amuru ya na 1786. O bu nwa Senza Ngakona, onye isi nke Abatetwa (otu pere mbara nke ndi Ngouni). Aha nne ya bụ Nandi. A nabataghị njikọ dị n'etiti Senza Ngakona na Nandi n'ihi na Senza Ngakona bụ otu n'ime ndị isi nke agbụrụ Abatetwa. Chaka bu ihe mbu dabere na nna ya, mgbe ahu nsogbu nke nwunye nke ikpeazu zighachiri nne ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka mmalite nke ndụ nke mmegbu, mmechuihu na mmegbu: onye ọzụzụ atụrụ, Chaka na ndị otu ya megburu ya, mesoo ya dịka bastard, kụrụ ya ihe ma hapụ ya ka ọ nwụọ na mpempe ala. Ahụmahụ ndị ga-echichi ma sie ike.
N'ụlọ Nandi nne ya, Chaka ga-eburu nna nna ya. Mgbe ahụ, na arịrịọ Senza Ngakona, Ngomane, onye ndú nke ugwu Mtetwas nyere ha ụlọ ma dị mma nye ha. Chaka agaghị echefu na: ịghọ onye mmeri dị ike, ọ ga-eme Ngomane ya nke abụọ.
Henry Cele dị ka Chaka Zulu (1984)
Afọ asaa ka m rutere Ngomane, Chaka ghọrọ onye so na Dinguiswayoo Army, onye a ma ama na Mtetwa. Chaka nwere metamorphosed: nwatakịrị nwoke na-esi ike ma na-ejide onwe ya aghọwo nwa okorobịa siri ike. Ọ bụ onye agha kachasị ike na ndị agha Dinguinswayo, nke nwere ume ike, nke na-adọrọ adọrọ ma na-agbanye aka n'ọgụ aka. Aha ya na-agbasa ma n'oge na-adịghị anya ọ ga-ekwuchite ọnụ Dinguiswayo na aka nri.
Nna Chaka, onye zitere ya na mpaghara ya, ghọrọ otu n'ime ndị na-achọsi ike na ya, ruo n'ókè nke ime ka ọ bụrụ onye nketa ya (n'agbanyeghị na Chaka mụrụ nke òtù na-akwadoghị iwu). Kaosinadị, mgbe ọ nwụrụ, Sijuana, otu n'ime ụmụnne ụmụnne Chaka, weghaara ya. Chaka na-ahazi atụmatụ ma gbuo ya mgbe ị na-asa ahụ wee bụrụ onye ndú ezinụlọ ya. Dinguiswayo, onye nyeere Chaka aka ibu onyeisi ulo Ngouni mgbe nna ya nwuru, gburu otu n'ime ndi iro ya, Zwide. Mgbe ihe omume a gasịrị, ndị ọchịchị na-ahọrọ Chaka dịka onye ndú mba. Chaka meriri Zwide ndị agha ndị gbara ọsọ ma nwụọ n'oge na-adịghị anya. Ọ ghọrọ onye ndú nke ọtụtụ n'ime ndị agbụrụ ndị Nguni wee ghọọ onye agha na-enweghị ume na enweghi ike ime ebere.
Mgbe Shaka ghọrọ onyeisi nke Nguni, ọ ga-nyegharịa Amazoulou (Amazoulou, "ndị nke elu-igwe", a aha nke e mechara ghọrọ "Zulu"), ha na-adịghị karịa 100 000 km² ala. Chaka oké ọchịchọ andikan reshapes ndị ya a ọkachamara agha akpụ idé nke ọha mmadụ, nke na akụghasị omenala owuwu. A na-eme ka ndị e biri úgwù na ndị metụtara ya dị ka oge efu. Oge nke mbido na-etinye aka na nkwadebe ndị agha. A na-emezi ọmụmụ ihe afọ ugbu a dị ka regiments ndị ọzọ. A na-eji 16 mee ihe maka afọ 60. Alụmdi na nwunye nani n'etiti 30 na 40 afọ na a na-ọdịda igbochi bravest regiments dị ka ụdị ụgwọ ọrụ. Ndị agha a lụrụ agha bụ ndị e guzobere n'usuu ndị agha dị iche iche nke ndị otu. (Ebumnuche nke ezinụlọ, nke dị mkpa n'Africa, na-ewepụrụ ya maka ịrụ ọrụ agha).
A na-agụnye otu puku ndị agha, ndị nwoke ma ọ bụ nwanyị, ndị inyom na-arụ ọrụ maka ọrụ nlekọta. Ndị isi oche ahụ bụ "Indounas". N'agbata agha abụọ, ndị na-anọchite anya ndị na-anọchite anya ndị agha na-anọ n'ogige ọzụzụ ma na-etinye aka na ọzụzụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ kwa ụbọchị. Chaka wepu akpụkpọ ụkwụ ya maka ndị agha ya n'ihi na ọ kwenyere na ha na-ebelata mmegharị ahụ. Nri ha na-abụkarị anụ, a machibidoro ha ịṅụ mmiri ara. Na agha, Chaka na-etinye ebe ịdọ aka ná ntị nke ígwè: ịlaghachi, ịlaghachi n'agụghị ngwá ọgụ ya gụnyere ikpe ọnwụ. Enwere ike ikpebi Indouna nke na-alaghachi n'enweghị ihe ọ bụla ka ọ bụrụ "a ga-eloda", ya bụ na a ga-ekpochapụ ya, mgbe ụfọdụ ya na ndị ikom ya niile.
Chaka na-agbanwe usoro agha nke ndị agha ya. Na oge a, ọ bụ omenala na agha ndị agha nke Intra-Afrịka iji rụpụta ube, mgbe ahụ ịkwalite ma ọ bụ gbaghaa dịka mmeghachi omume onye iro ahụ. Chaka na-ahụ usoro a ka ọ ghara ịdị irè, ọ bụrụ na ọ bụghị ụjọ. O nwere ogige ndị na-adị mkpirikpi nke ọ na-eme nke ọma. Ya mere, ube a na - eji ya eme ihe nanị na njide aka n'aka ma na - akpali onye agha ahụ iwe na - adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịbụ onye ndị mmegide na - ebu ngwá agha dị ogologo.
Chaka na-agbanwe ndị agha piecemeal atụmatụ: ọ opts maka mmegide atụmatụ "buffalo isi": ndị agha na-ekewa n'ime anọ ozu, nku abụọ na-etolite na buffalo mpi abụọ Central ozu enịm otu n'azụ ụdị ọzọ ahụ bụ "okpokoro isi". Na-arụ ọrụ n'ịgbagharị agbagharị, otu nku na-awakpo, ebe ndị ọzọ na-ezochi ma na-emegharị naanị mgbe agha ahụ na-agba. Azụ ndị a bụ ndị dike. Ọrụ ha bụ igbochi onye iro ahụ ka ọ ghara ịzọ ụkwụ, iji mee ka ọ maa jijiji ka ọ laghachi azụ. N'ebe ahụ, n'etiti ndị na-eche ihu, ndị agha nwere ahụmahụ, na-echere ka ha na-agba ọsọ, na-agba ọsọ iji were onye iro ahụ. Oge dị mkpa nke ọgụ ahụ, mgbe ọbịbịa nke agha ọhụrụ ga-amanye mmeri. Ma ọ bụrụ na mkpebi na-adịghị adọwa, mgbe n'azụ, esịnede lagoro ezumike nka, onye ruo mgbe ahụ nọgidere na idobere, ọdụ na ya azụ ka agha na-agụnye n'aka.
Ndị agha Chaka n'ogo ya ga-enwe karịa mmadụ 100 000. Chaka na-eduzi mgbasawanye nke Zulus na ntụziaka abụọ: n'ebe ọdịda anyanwụ ebe Sot na Bechouana "na-achụsasị" ma na-agbagharị. N'ebe ndịda megide Tembou, Pondo na Xhosa. Chaka na-eme "Mfecane": a na-ewepụ ndị agadi nke ndị ahụ e meriri emeri, ndị inyom na ndị na-eto eto na-ewebata. A na - azọpụta ndị na - eto eto ma ọ bụrụhaala na ha etinye aka na "Impis", hapụ aha ha na asụsụ, wee ghọọ ezi Zulus.
Na 1820, afọ anọ mgbe mmalite nke mkpọsa mbụ ya, Chaka meriri ókèala karịa France. Dị ka ụfọdụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme si kwuo, mmeri ya ga-abụ kpọmkwem ọnwụ ma ọ bụ karịa mmadụ 2. Mbelata nke Chaka amalite ya na-emekarị nke na-esiwanye olu ike ka ọchịchị aka ike nke akwụ ya mmegide nke ndị ya: nloghachi nke a Mbupu, Chaka massacred niile dike onye dara ma ọ hapụrụ ha na ngwá agha: ọ bụ ụbọchị ahụ kwuru "igbu egbugbu". Ndị na-akwado ya kwesịrị ntụkwasị obi malitere ịhapụ ya. Otu n'ime ndị isi na-aga n'ebe ugwu ma guzobe ndị Angoni. Onye ọzọ nke Mzilikazi na-eduzi biri n'ebe ndịda nke Zimbabwe nke oge a, ọ bụkwa na mmalite nke Matabele. Mgbe nne Nandi ya nwụrụ na 1827, Chaka nwere karịa ndị 7 000 gburu. Ruo otu afọ, a machibidoro ndị di na nwunye iwu ibikọ ọnụ na onye ọ bụla na-aṅụ mmiri ara.
Ọnọdụ nke ọnwụ ya na 1828 abụghị nke doro anya: Chaka nwụrụ nwanne ya nwoke Dingane. Ọ na-eme atụmatụ nke Dingane na Mzilikazi, nke otu ohu nyere aka.
Ndụ nke Chaka mụrụ akwụkwọ akụkọ a ma ama nke onye edemede Africa bụ Thomas Mofolo (1877-1948) nke isiokwu ya bụ "Chaka" nke dị n'etiti akwụkwọ iri na abụọ nke Afrika nke narị afọ 20. Mpempe akwụkwọ a, nke e dere na 1911 n'asụsụ Sotho ma bipụtara afọ iri na abụọ ka e mesịrị, bụ otu n'ime akwụkwọ edemede mbụ e dere n'Africa.
Chaka bụ onye ndú na-adọrọ mmasị, onye nduzi na onye nhazi nke onye maara ihe, onye guzobere otu mba. Dị ka Napoleon, onye e jiri ya tụnyere ya (Chaka malitere ịchị otu afọ mgbe Agha nke Waterloo) Chaka bụkwa onye mmeri na onye nchịkwa. Omume ya mere ka ndụ na njedebe nke mpaghara dum nke ndịda Africa.
NSOGBU AK THEKỌ N’AMEBAMERAME SAME
Samory Touré, nnukwu onye ọbịa na-eguzogide West Africa
Zụta ụdị ngwaahịa